Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. ‘जय भोले’ सँग वार्ताको ढोका खुल्ला छ : दीपकराज गिरी – Emountain TV
काठमाडौं, २९ बैशाख । दीपकराज गिरी र दीपाश्री निरौला एण्ड टिमले निर्माण गरेका फिल्म दशैंको फूलपातीमा रिलिज हुने गरेका छन् ।छक्का पञ्जाका दुई सिरिज दशैंलाई लक्षित गरेर प्रदर्शनमा आएका थिए । अचेल यो मितिमा कुनै फिल्म रिलिज गर्नु भनेकोबाघको मुखमा हात हाल्नु सरह हो भनिन थालिएको छ ।
यसैबीच निर्माण घोषणाकै क्रममा अशोक शर्मा निर्मित तथा निर्देशित फिल्म जय भोले ले दशैंको फूलपाती ताक्दै प्रदर्शन मिति तय गर्‍यो । यो फिल्मको छायांकन सकेर युट्युब र हलमा टिजर समेत बजिरहेको छ ।छक्का पञ्जा ३ को भने स्क्रिप्टको काम ढिलो भएपछि शुक्रवारबाट छायांकन सुरु भएको छ ।
सुटिङ गर्न ढिलाई भएपछि छक्का पञ्जा ३ु दशैंमा नआउने खुब चर्चा थियो । तर, शुक्रवार फिल्मको मुहर्त गर्दै निर्माण टिमले दशैंको फुलपातीबाट ब्याक नहट्ने बताएको छ । दशैंको फूलपातीमा जय भोले पनि प्रदर्शन हुँदैछ भन्ने पत्रकारको प्रश्न अधुरै रहँदा दीपकराज गिरीले त्यस विषयमा आफू अनविज्ञ रहेको शारीरिक हाउभाउका माध्यमबाट प्रस्तुत गरे ।
जय भोले सँग भिडन्त पक्का नै हो भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा उनी भन्छन्,भिडन्त भन्ने शब्द राम्रो हुन्न । एकसाथ प्रदर्शन हुँदैछन् भन्नु राम्रो हुन्छ । हामी कसैसँग भिड्न गएका होइनौं । हामीले दशैंको फूलपातीमा फिल्म रिलिज गर्दै आएका छौं । यो मितिमा अन्य फिल्म रिलिज हुनु नै हुँदैन भन्ने होइन । मात्र ठूला फिल्म एकसाथ प्रदर्शन हुनु राम्रो होइन ।
उनले जय भोले सँग वार्ता गर्न ढोका खुल्ला रहेको बताए । उनी भन्छन्, हामी उहाँहरुसँग वार्ता गर्न तयार छौं । सहमतीबाट हामी अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नेछौं । खबरअनुसार, केही दिनदेखि दीपकराज र अशोक शर्माबीच फिल्मको प्रदर्शन मितिको बारेमा दैनिकजसो वार्ता भइरहेको छ ।
लगातार दुई सिरिज सुपरहिट भएको ब्राण्डसँग भिडन्त गर्नु जय भोले का सामुन्ने ठूलै चुनौतीको पहाड खडा छ । उता हाल प्रदर्शनरत फिल्म डमरुको डण्डीबियोु बक्सअफिसमा असफल हुँदा यसको असर जय भोले लाई नपर्ला भन्न सकिन्न । कारण, उक्त फिल्मका लेखक तथा कलाकार खगेन्द्र लामिछाने हुन् ।
सहमतीबाट दुईमध्ये एकको प्रदर्शन मिति फेरबदल भए ठूलो महासंग्राम हुनबाट रोकिने छ । अन्यथा, यस वर्षको दशैंको फूलपातीमा जय भोलेु र छक्का पञ्जा ३ को भिडन्तले सिनेवृतमा सानो तरंग ल्याउने छैन । फिल्मीखवरबाट